Nagu saabsan - Wistron Industrial Limited
Shirkadda Wistron Industrial Limited
Shirkad dhammaystiran oo isku -darka warshadaha iyo ganacsiga
Beijing Wistron Technology Ltd. waxaa la aasaasay sannadkii 2012. waa shirkad dhammaystiran oo isku dhafan warshadaha iyo ganacsiga. Waa ganacsi dhammaystiran oo diiradda saaraya cilmi -baarista iyo horumarinta, wax -soo -saarka iyo iibinta tas -hiilaadka alaabada badbaadada waddada tamarta Solar iyo qalabka taraafikada caadiga ah ee la xiriira. Waqtigan xaadirka ah, shirkaddu waxay leedahay shatiyada wax soo saarka, oo leh nidaam maareyn tayo tayo leh oo dhammaystiran oo sayniska ISO9001, badeecaduhu waxay dhaafeen CE, ROHS, FCC, IP68 iyo shahaado kale, iyo sidoo kale si waafaqsan heerarka Yurub iyo Mareykanka ASTM D4280 iyo heerarka EN1463-1 .
Kooxda R & D wax soo saarka xirfadeed
Shirkaddu waxay leedahay koox R&D wax soo saar firfircoon oo xirfad leh, iyo 40% faa'idada sanadlaha ah ayaa loo adeegsan doonaa farsamada R&D Oo lagu qalabeeyay khaldan iyo is-dhexgalka nidaamka aqoon-is-weydaarsi wax soo saar boodh la'aan ah 1000 mitir oo laba jibbaaran. Waxay leedahay nidaam maareyn ganaax oo adag oo kaamil ah qaybaha, wax soo saarka iyo xakamaynta tayada, kaas oo bixiya dammaanad lagu kalsoonaan karo wareegga dhalmada, xakamaynta tayada iyo heerka gudbinta sare.
Tayada, daacadnimada, badbaadada iyo badbaadinta tamarta Marka hore Macaamilka
Waxaan si qoto dheer ugu hawlannahay warshadaha, waxaan haynaa garaaca warshadaha, waxaanan u hoggaansamaynaa tilmaanta “Marka hore Macaamilka badbaadinta tayada, hufnaanta, badbaadada iyo tamarta”. U hoggaansana istaraatiijiyadda alaabta R&D, wax soo saarka iyo iibinta. hadda, badeecadaha ayaa loo dhoofiyay Koonfur -bari Aasiya, Yurub iyo Ameerika, Bariga Dhexe iyo Australia, Afrika, Koonfurta Ameerika iyo boqolaal waddan iyo gobollo.
Daacadnimo, Is -xilqaan, Isuduwid, Hal -abuur
Wistron wuxuu xambaarsanyahay ruuxa iskaashiga ee Daacadnimada, Is -xilqaamidda, Isuduwidda, Hal -abuurka maanka ku haya mar walba wuxuuna ku dadaali doonaa inuu qanciyo macaamiisha rugta korontada ee Solar -ka oo uu ku guuleysto saamiga suuqa oo badan iyo sidoo kale yaraynta isticmaalka tamarta adduunka maalmaha soo socda. Ujeeddadayadu waa in aan dhisno xiriir ganacsi oo muddo dheer faa'iido u leh dadka adduunka oo idil, waan u mahadcelin doonaa xiriirkaaga, aad baad u mahadsan tahay!